एमबीबीएससको शुल्क बढाउने निर्णय प्रति केसीको आपत्ती - Pahilo Click
October 20, 2019 |Pahiloclick
काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आपत्ती जनाएका छन् । वैज्ञानिक अध्ययन नगरी शुल्क निर्धारण गर्न नहुने भन्दै आयोगको यो निर्णय मान्य नहुने डा. केसीले बताएका छन् ।
त्रिशूली विद्युत् गृहको सर्किट ब्रेकरमा आगलागी; दुई घाइते, विद्युत् आपूर्ति बन्द
यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण